Dyclonine Hwl (536-43-6) nke na-acha ọkụ na-emekarị =98% | AASraw
Dyclonine HCL ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Dyclonine HCL ntụ ntụ
SKU: 536-43-6. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Dyclonine HCL powder (536-43-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Dyclonine Hydrochloride bụ nnu hydrochloride nke Dyclonine, nke a na-emeghị ka ọ bụrụ nke a na-ahụ maka ọrịa anesthetic. Dyclonine na-ejikọta na ọwa mmiri sodium na-arụ ọrụ na akpụkpọ anụ ahụ, si otú ahụ na-ebelata ikikere akpụkpọ anụ ahụ nke na-eme ka ọnụọgụ sodium, na-eduga n'ọzọ dị elu maka ntụrụndụ.
Dyclonine HCL anesthesia ntụ ntụ video
Dyclonine Hwr HCL nsị isi Characters
aha: Dyclonine HCL
Molekụla Formula: C18H28ClNO2
Ọbara arọ: 325.87
Dyclonine Ụdị HCL nkwụsị ntụ ntụ
Dyclonine HCL ntụ ntụ aha
Dyclonine HCL na-ezo aka na Dyclonine hydrochloride.
Dyclonine HCL ntụ ntụ eji
①Ya mere iji gbochie ihe mgbu nke ọnya esophageal; 5-15 mL nke 0.5% dyclonine ngwọta nwere ike ilo ya dị ka edepụtara.
②Na-eme ka gị na anya gị ma ọ bụ eyelids. Zerekwa ngwa na mpaghara buru ibu.
③Hụ na 15 ° -30 ° C (59 Celsius -86 ° F) na nkwụchi, nke na-eguzogide ọkụ ma ọ bụrụ na esiteghi ya.
Ịdọ aka ná ntị na Dyclonine HCL ntụ ntụ
Nyocha na ọgwụ ọjọọ
①Inyela ihe ọ bụla nwere ndidi site n'ọnụ n'ime 60 min (ruo mgbe ị ga-alọghachi na ngwangwo gag) mgbe ị gesịrị nlekọta ọgwụ. Drug nwere ike igbochi nke abụọ nke ilo mgbe eji okwu ọnụ ekwu okwu.
②Test gag reflex site na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbaji palate ọnụ na swab swab (mgbe na-ejide ire na onye depressor). Ọ bụrụ na ndidi anaghị ada ma ọ bụ ilo, enyela ihe ọ bụla n'ọnụ. Echekwa ihe dị mkpa iji gbochie ọchịchọ.
Rịba ama: Achịcha nke mmiri doro anya kwesịrị ịbụ ihe mbụ a ga-elo ma ọ bụrụ na ịghaghachi azụ.
Ntachi Obi na Ezinụlọ
①Nwepụ nke nchịkọta nke mgbagwoju anya na nchedo kwesịrị ekwesị.
②Abula na ị na-aṅụ ọgwụ ahụ n'ejighị ọgwụ dọkịta.
Dyclonine Oral dent Rinse bụ anesthetic dị n'elu n'ụdị nchacha nke na ndị ọrịa nwere ike ịgafe maka otu nkeji iji gingival na anụ palatal. Ọ bara uru maka ndị ọrịa na-ehicha ọcha bụ ndị chọrọ nchịkọta ọrịa ma ha achọghị ka ị na-eme ka ọnụ na-agba ha ọnụ. A kọwawo na dyclonine ga-enyere onye nwere nsogbu dị nro aka n'oge ọ na-eche echiche.
Ụdị Dyclonine Hwr HCL
Ry Dyclonine HCL ngwongwo Marketing
Esi zụta Dyclonine HCL ntụ ntụ si AASraw
Ry Dyclonine HCL ntụ ntụ Ezi ntụziaka: